Saido Berahino oo aabo u noqday sedex caruur ah mudo lix todobaad gudaheeda! | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Saido Berahino oo aabo u noqday sedex caruur ah mudo lix todobaad gudaheeda!
Saido Berahino oo aabo u noqday sedex caruur ah mudo lix todobaad gudaheeda!
Weeraryahanka naadiga Stoke City Saido Berahino shaqadiisa gudaha garoonka ma wanaagsano madaama uu labo gool kaliya dhaliyay mudo 913-maalmood gudaheeda.
Balse Saido Berahino hadal heyn aan caadi ahayn ayuu maanta la yimid madaama la sheegay in lagu eedeenayo in xidigan aabo u noqday sedex cunug lix todobaad gudaheeda!
Saido Berahino sedexdaan cunug ee ifka ku cusub lix todobaad gudaheeda ayuu aabo ugu noqday madaama jaceylkiisii hore Stephania Christoforou oo 27-jir ah ay dhashay wiil yar oo Costa loo bixiyay 30-kii May 2018 magaalada Birmingham ayay ku dhashay.
Sidoo kale Berahin jaceylkiisii hore Chelsea Lovelace iyadana gabbar loo bixiyay Aniya Marie ayay dhashay 17 July 2018 waxayna ku dhashay magaalada Walsall.
Sidoo kale The Sun ayaa qortay in Saido Berahino qareenkiisa uu wada hadal kula jiro haweeney kale oo sheegtay inay cunug aabo u yahay cayaaryahankan dhashay 15-kii July 2018.
Haweeneyda sedexaad ee sheegtay Berahino inay cunug u dhashay waxay magaceeda u sheegi weesay arimo dacwada kiiskan la xariiro waxayna rabtaa inay magaceeda iyo cunuga ay xidigan u heyso magaciisa saxaafada la wadaagto marka Berahino maxkamada horteeda ka aqbalo inuu isaga aabo u yahay cunuga ay u dhashay.
Dabcan cayaaryahankan waxaa saaran culees xirfadiisa cayaareed haatana waxaa ugu darsameen dacwado noloshiisa gaarka ah culees ii saareyso.
Haddii Saido Berahino aqbalo inuu sedexdan cunug mudo lix todobaad gudaheeda ku dhasheen aabo u yahay waxay ka dhignaan doontaa labo sano gudaheeda inuu labo gool ku dhaliyay halka lix todobaad gudaheeda sedex caruur ah aabo ugu noqday!
Previous: Askari lagu toogtay Boosaaso & saddex ruux oo la dhaawacay….
Next: Qaar kamid ah Taliyaasha Saldhigyada Booliska gobolka Banaadir oo la bedelay